Iindaba -I-22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Sept 16-18 2020
I-22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Sept 16-18 2020
Iqela lokuthengisa likaZhengchida liye kwi-22nd IHortiflorexpo IPM Beijing Exhibition ngo-Septemba 16-18th, 2020. Umsitho wokuvula ibingumbono omhle.
Ngenxa ye-convid-19, le yi-1st Umboniso kuphela ebesiye kuwo kulo nyaka, kodwa ungabizwa ngokuba yimpumelelo enkulu. Sasindwendwelwe ngabathengi abaninzi basekhaya abavela kwimizi-mveliso yokucheba, abathengisi basemakethi, kunye neenkampani zorhwebo. Uninzi lwabathengi bamanye amazwe luvela kuMazantsi mpuma eAsia, njengeKorea, iJapan neThailand. Kuzo zontathu iintsuku, umnquba wethu wawugcwele ngabantu kwaye nabafana bethu bahlala bexakekile.
Sibonise iimveliso zethu ezintsha kunye neekhathalogu. Abathengi abaninzi babonisa umdla omkhulu kwiimveliso zethu zecandelo lokucheba ingca, iibrashi zokusika ibrashi, iincakuba zomqukumbelo, iincakuba zokucheba uthango kunye neemela zefilili. Batsalwa ziimveliso zethu ezenzelwe wena, iindidi ezipheleleyo zeemodeli, i-MOQ ephantsi kunye nobuchwephesha, ezinye zazo zaze zenza isivumelwano nathi kwibhokisi. Ukuphela komboniso, besele sifumene amakhadi oshishino angaphezu kwe-100.
Sadibana nabathengi bethu abathembekileyo abadala. Sathetha ngemiyalelo, sabelana ngezinto ezintsha esizenzileyo, saxoxa ngezicwangciso ezitsha, kwaye satshintshana ngezimvo malunga neendlela zeshishini. Enkosi kubathengi bethu abalungileyo, ukuba iZhengchida inokukhula okuzinzileyo okuqhubekayo kule minyaka. Siza kuqhubeka nokubonelela ngenkxaso yobungcali kunye nokuphucula inkonzo yethu ukugcina ubudlelwane bexesha elide beshishini kunye nobuhlobo.
Ndiyathemba ukuba abantu abavela kumazwe ahlukeneyo bayamanyana kunye ukulwa iConvid-19, kwaye esi sifo siyanyamalala kwikamva lokuqala. Emva koko sinokuqhubeka nokuya kwimiboniso emininzi, njengeSpoga + Gafa, i-GIE EXPO, kunye neCanton Fair ekhaya nakumazwe aphesheya, ukwazisa ii-blower zethu zokucheba kubantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Siyakholelwa ukuba ukuthembela kumgangatho wethu obalaseleyo, inkonzo, amava kunye nenqanaba lamaxabiso, siya kwaziwa kwaye sithandwe ngabathengi abaninzi nangakumbi.
Ixesha Post: Oct-13-2020